« Mba maniry aho | «Mon Gasikara à moi : politique et développement
← De la science à la divination : Einstein un grand mpisikidy
My smart green dream →
Ny alarobia 28 aogositra 1964, teo amin’ny Lincoln Memorial, tao Washington DC, USA rehefa nikabary mikasika ny faniriany mba anafoanana ny fanavakavahambolonkoditra ny pasitera Martin Luther King, dia naverimberiny ny fehezanteny hoe « I have a dream ». Fantany fa hisedra ny mafy izy amin’io tolona ho ataony io ary nanaraka hatramin’ny ainy mihitsy aza satria efa raikitapisaka tao anaty ny fomban’ny amerikanina fotsy ny fanavakavahana ary fototra niorenan’ny toekaren’ireo mihitsy ny fanandevozana.
Ombako manana ankehitriny ny fandikàna ny fanirian’io pasitera mainty io tamin’izany mikasika ny tanindrazantsika satria raikitapisaka ato anatin’ny fisainantsika malagasy koa ny fanevatevana ny asan’ny filohampirenena sy ny mpanompo firenena rehetra satria izay rehetra tonga eo tsy misy miraharaha hafa tsy ny tenany ary izay tavela tamin’ny taloha, mampiana-dratsy ireo tonga ato afara. Maro ireo olona izay nihevitra fa hafaka ny anova avy ao anatiny ny fomba ratsin’ny mpanao politika izay tonga eo amin’ny fitondràna, nefa dia na mangina satria tsy mahefa ny nokajiana ireo, na miala maina toy ny mpamositra aliaka toy ingahy Gervais Rakotoarimanana farany teo. Tsy mahomby izany iny tetika fanovàna avy ao anatiny miaraka amin’ny dahalo iny aloha hatreto.
Koa dia mba maniry aho, mba hitsangana toy ny olon-tokana ny olompirenena rehetra mahatsapa tena, mba hitakiana ny fanaraha-maso entitra sy mahefa ary mahaleotena, ny fintondràna sy ny mpiasam-panjakàna rehetra. Efa nilaza sy nanome fampanantenàna daholo ny mpifaninana rehetra nifanesy izay fa izay tonga teo namitaka sy nandainga daholo. Ka tsy azo antoka izany izahay mpanao politika raha teny homena fotsiny no angatahina fa tsy maintsy asiana takalony raha toa ka tsy manatanteraka izay nifanarahana ny tomponandraikitra tonga eo.
Maniry ko aho mba ho takalon’ny fahefana ampidramina izay voafidy, dia mba ho azo saziana toy ny olompirenena mpampiasa azy ny olomboafidy rehetra satria olontsotra nampidramina fahefàna izy fa tsy andriamanjaka akory ka ho atao ambonin’ny olompirenena tsotra. Tokony azo saziana amin’ny fandikàna lalàna ataony na ataon’ny fitondrana entiny ny olomboafidy sy voatendry, dia azo roahina toy mpiasa rehetra tsy mahomby koa rehefa tsy mahavita manatanteraka ny fampanantenana nomeny.
Maniry koa aho mba ho hafaka amin’ny fisainan’andevo ny mpiarabelona rehetra amiko. Mba hitombo fahendrena sy fahalalàna ny rehetra ka tsy ho variana milelaka sy manindrahindra ireo izay efa nanitsaka sy nanaliaka azy fa mba ahay hijery ny marina sy ny rariny. Ny sasany tampin’ny vola, ny maro tsy mandraharaha fotsiny izao nefa dia raha mbola ny fanaovana politika no maloto dia tsy androso mihitsy ny firenentsika fa ny fetsiratsy sy ny mpanoariana foana no anjaka eto amin’ity taninjanantsika ity.
Ary farany maniry aho mba iombokevitra ireo rehetra izay tena nihezaka ny anao soa na tamin’ny fitondran’iza na fitondran’iza mba iaraka ikaon-doha sy hifanampy ampandrosoana ny firenena. Tsy marina velively izany hoe mila olona vaova izany, vaovao angalatra be be kokoa? Ny olona manana traikefa sy efa niezaka ny anao tsara no ilaina miaraka mikaroka sy mampihatra ny vaha-olana mandeha ho an’ny firenena. Fantatsika rehetra ny lalankizorana ary tsy misy tsy mahalala ny fahasarotan’ny fampiarana azy satria efa lasa tombin-dahalo ny fitantanan-draharaha ankehitriny, manomboka an amin’ny ambany indrindra ka hatrany amin’ny avo indrindra, ka mila mifanampy ahafahan’izay tonga eo amin’ny fanompoana fara-tampony, aka ny fepetra rehetra ilaina ahafahana manompo marina ny firenena sy ny fanjkàna, izany hoe ny vahoaka.
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué Filoha azo tsaraina, Mpanompo firenena, Politika malagasy, taninjanaka. Ajoutez ce permalien à vos favoris.